Fiantraikany amin'ny tahiry bibidia | Fiaretana haran-dranomasina
Ny tranom-borona an-dranomasina amoron-tsiraka dia mety hiteraka fiantraikany amin'ny tahiry dia satria any amin'ny rano an-dranomasina nozaraina sy misy karazam-biby fahanana ao anaty toerana voafetra. Raha tsy misy ny drafitra sy ny fitantanana araka ny tokony ho izy, dia mety hisy fiantraikany amin'ny tahiry bibidia mety hitranga: fanesorana ireo karazam-borona mba hatao fry, fitsoahana trondro voajono, fihodinan'ny karazam-borona, ary fiantraikan'ny sakafo. Mifanakalo hevitra momba ireo mety ho fiantraikan'ny fiompiana trondro sy ny protokolota isika mba hampihenana ireo fiatraikany amin'ny tontolo iainana amoron-dranomasina etsy ambany.
Raha ahena ny fitantanana tsara sy ny fiatraikany, dia mety ho lasa fitaovana mampiangona trondro (FAD) ny tranom-borona ao amoron-dranomasina ary mety hanome lanja ny toeram-ponenana. Ny ahidrano dia hitombo amin'ny firafitr'ireo tranomaizina izay hahasarika ny zooplankton kely izay hanintona trondro kely sy crustacea. Ireo zavamiaina bitika kely ireo dia hisarika ny biby mpiremby kokoa amin'ny firafitra amin'ny farany hamorona ekolojista kely manodidina ny FAD. Ny tranom-borona vita amin'ny hazandrano amoron-dranomasina araka ny tokony ho izy dia afaka manintona trondro any amin'ny faritra tsy misy trondro raha tsy izany. ref
Ny endasina na zana-ketsa dia matetika no amboarina ao amin'ny fantsom-panafody mifototra amin'ny tany, izay ahalehibe ny trondro hamokatra olitra ary hitombo amin'ny habe lehibe azo afindra amin'ny toerana lehibe. Na izany aza, any amin'ny toerana sasany sy ho an'ny karazana sasany, ny rafi-pamokarana akondro dia manatanteraka izay antsoina indraindray hoe "fiompiana". Io karazana fiompiana anaty fiompiana io dia miankina amin'ny fisamborana zana-trondro tanora toy ny endasina na ny olon-dehibe izay hafindra mandritra ny fotoana maharitra mankany amin'ny sambo ranomasina ary omena mandra-pitondrana azy ireo eny an-tsena. Ireo karazan-karazany izay miankina matetika amin'io fomba io dia ny trondro, tuna, karazana yellowtail (seriola), ary crustacea.
Amin'ny fomba fijery ekolojika, ny fomba fampiasa hatchery ho an'ny trondro dia matetika no tsara kokoa noho ny teknika fiompiana. Ny famafazana saosy marobe amin'ny ala dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny mponina eo an-toerana - indrindra ny fananganana tahiry sy ny habetsahan'ny ankapobeny, raha atao amin'ny ambaratonga lehibe. Ny fiompiana dia mety hisy fiatraikany amin'ny tranokala sakafo ary hisy vokany misimisy kokoa manerana ny tontolo iainana an-dranomasina manontolo. Ho fanampin'izany, ny fametrahana ny trondro dia ho lasa rafitra kolontsaina mahery vaika dia mety hiteraka risika amin'ny fiarovana ny fiainana manokana ary mety hampiditra aretina.
Ny ankamaroan'ireny olana ara-tontolo iainana azo trandrahina ireny dia azo ahalefaka amin'ny alàlan'ny famokarana ny endasina avy amin'ny rafitra famonoana hena mihidy izay ahazoan'ny mpiasa mifehy ny tsingerin'ny ain'ny olon-dehibe sy ny olitra. ref Ao amin'ny rafitry ny famonoana, ny olon-dehibe babo dia ampiasaina hamokarana trondro tanora, izay avy eo hafindra any anaty tranom-borona an-dranomasina mba hitombo. Amin'ny alàlan'ny fofom-boaloboka atody, ny mpitantana ny toeram-pambolena dia tsy miankina amin'ny vahoaka an'ala amin'ny tranom-borona, ankoatry ny fitrandrahana broodstock olon-dehibe voafantina.
Raha azo atao, manendasa loharano avy amin'ny hatcheries mba hanamaivanana ny tsindry amin'ny mponina eo an-toerana
Raha tsy misy ny fofom-panafody, ny ezaka rehetra dia tsy maintsy hasiana fofom-bary avy amin'ny tahiry dia izay tsy misy ankehitriny na atahorana ho fihinam-be loatra.
Raha misy ny fiompiana trondro any amin'ny tontolo iainana an-dranomasina, raha misy tranom-borona na harato na tsy karakaraina mandritra ny fijinjana na famindrana trondro, dia afaka mandositra any anaty ala ny trondro voaangona. Ireo hetsika fandosirana ireo dia fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "fandrobana." Misy fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana maro ny tranga iray: ny fanovana ny dinamika amin'ny tranokala, ny famindrana ny aretina ho an'ny mponina dia, ary ny fiatraikany ara-pirazanana amin'ny mponina an'ala amin'ny alàlan'ny fiarahan'ny karazana bibidia. Raha mamorona mponina any an'ala ny trondro tafatsoaka dia azo atao ny mifaninana amin'ireo karazam-borona hafa na mamindra aretina amin'ireo mponina any an'ala. Ny trondro mitsoaka dia afaka mifampiditra amin'ny tahiry dia ary, miankina amin'ny toetoetran'ny karazam-piompiana, dia mety hanova na hampihena ny tahiry dia. ref
Ireto olana ara-tontolo iainana sy ara-pirazanana ireto dia azo hamaivanina amin'ny alàlan'ny fitantanana tranokala sahaza, ao anatin'izany ny fanombanana matetika ny toeto tranomaizina sy ny fiantohana fa vita ny fanamboarana rehefa ilaina izany. Raha tsy voatazona ny harato ary avela hihalemy dia hisy ny fandosirana. Na izany aza, raha mavitrika ny mpitantana amin'ny fiarovana ny fahasalaman'ny harato amin'ny ankapobeny, dia hahena ny fandosirana.
Mampiasà tranom-borona natokana hampihenana ny fitsoahana ary hamolavola drafitra fampihenana ny fandosirana ho an'ny toeram-piompiana
Mandraisa anjara amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka ireo tranom-borona mba hitazomana ireo andalana sy fitaovana ary hijerena ireo fandosirana
Hamarino fa misy ny fitandremana manokana rehefa afindra na jinjaina avy amin'ny tranomaizina ny trondro
Diniho tsara ny mety fanimbana na fangalarana avy amin'ny toeram-piompiana ary apetraho amin'ny toerany ny fepetra fiarovana
Hamarino ny fipetrahan'ny toeram-pambolena sahaza mba hampihenana ny fipoahan'ny tafio-drivotra sy ny tranga fitsoahana
Fambolena karazana eo an-toerana ary sorohy ny fambolena karazan-tany tsy tompon-tany na tsy voajanahary
Diniho raha mety ny mitahiry trondro steril, raha tsy mety eo an-toerana sy atolotry ny manam-pahaizana momba ny fiompiana fahalalana fahalalana momba ny karazany.
Manaova fanombanana loza mety hitranga amin'ny fiantraikan'ny fototarazo, ary tsara indrindra, fanaovana maodely ireo tranga mety hialana amin'ny mponina an'ala
Manaova fanombanana loza mety hitranga amin'ny fifaninanana mety ho an'ny sakafo sy ny honenana eo anelanelan'ny tahiry dia sy ny trondro tafatsoaka
Fampiasana karazan-javaboary voaaro
Tokony hodinihina koa ny fiatraikan'ny fiompiana anaty akondro amin'ny karazan'olona mampiahiahy, toy ny biby mampinono an-dranomasina (dugong, feso, trozona), sokatra ary voron-dranomasina. Raha jerena fa ny ankamaroan'ny asa fiompiana anaty akondro dia miavaka amin'ny tranokala miorina ary manana sisin-dranomandry mihenjana, ny ankamaroan'ny asa fiompiana an-dranomasina dia mazàna manana risika ambany noho ny fikorontanana raha oharina amin'ireo hetsika hafa misy tsipika mihetsiketsika na tsy misy fihenan-tsasatra, toy ny jono na gillnets.
Cages tranokala lavitra ireo faritra fantatra izay ampiasain'ny karazana voaaro matetika, toy ny akanin-jaza, ny toeram-pisakafoanana ary ny lalan'ny fifindra-monina
Mamorona drafi-panaraha-maso izay misy fanaraha-maso tsy tapaka ny biby an-dranomasina akaikin'ny toeram-piompiana ary manamarina ny tady sy ny harato hahazoana mikorontana. Raha azo atao, dia ampiasao fitaovana fanaraha-maso ny olombelona sy ny teknolojia (oh: fakan-tsary)
Tazomy tsy tapaka ny tadin'ny toeram-pambolena sy ny tadiny ary ny fitaovana hafa mba hiantohana ny fihenan'ny tadiny
Aza ariana ny fihinanan-kanina na fako be loatra eo akaikin'ny tranom-borona satria mety hahasarika biby an-dranomasina io ary hampitombo ny mety hisian'ny fidiranana
Hevero ny fampiasana fitaovana fanakanana ny biby mampinono an-dranomasina, raha tsy mifanaraka amin'ny sahaza sy tolo-kevitr'ireo mpahay siansa fahalalana ny toe-piainana sy ny tontolo iainana eo an-toerana
Ny famahanana akondro dia iray amin'ireo mpamily manan-danja indrindra amin'ny faharetana amin'ny fiompiana trondro. Ny feed ihany koa dia mazàna no singa lafo indrindra amin'ny asan'ny toeram-piompiana ary matetika dia miankina amin'ny sakafon'ny trondro sy menaka azo avy amin'ny tahiry hazandrano. Any amin'ny firenena maro sy ny toeram-piompiana bitika, ny trondro iray manontolo, ny fanapahana trondro, ary / na ny famonoana biby dia azo ampiasaina ho sakafanana mifanohitra amin'ny plastika ara-barotra. Ny fampiasana ny sakafom-bolo tsy misy fahaizana manokana dia afaka mampihena ny kalitaon'ny rano satria ireo fitaovana ireo dia mety levona sy simba mora foana eo amin'ny tsanganana rano na eny amoron-dranomasina, mitarika fananganana fako biolojika izay misy akony amin'ny tontolo iainana manodidina.
Ny fampiasana ireo feed ireo fa tsy ny pellets ara-barotra dia tsy mahomby amin'ny lafiny ekolojika sy ara-toekarena satria mety hisy ny taham-pitombo ambany satria tsy manome ny fepetra takiana farafahakeliny ho an'ny karazana kolontsaina izy ireo. Ary koa, amin'ny alàlan'ny fampiasana akora biolojika izay tsy nandalo haavo fanodinana na fanamafisam-peo ho sakafo, ny mpandraharaha amin'ny fambolena dia mety hampiditra otrikaretina sy katsentsitra. ref Ny fomba fitantanana araka ny tokony ho izy dia tokony hisy ny fitadiavana ireo pellet ara-barotra hampihenana ny fiantraikan'ny tontolo iainana eo amin'ny fambolena. Ny fitantanana dia tsy maintsy maka antoka fa ny sakafom-bava azo atao dia lanin'ny trondro, satria ny pellets tsy mihinana dia mety hilentika any am-pototry ny ranomasina na hitsingevana miaraka amin'ny onja, izay samy misy akony eo amin'ny tontolo iainana eo an-toerana.
Ny masontsivana iray izay tena ilaina ao an-tsaina dia ny FIFO, na ny Fish In-Fish Out. Ity masontsivana ity dia manondro hoe ohatrinona ny trondro hazandrano dia ilaina hamokarana trondro fambolena. Amin'ny trondro salmon dia 0.82 kg trondro fora no ilaina mba hamokarana salmon 1 kg ary 0.53 kg ilaina hamokarana trondro an-dranomasina 1 kg amin'ny ankapobeny. ref
Mampiasà fahana manokana ho an'ny karazana fiompiana tsara kalitao, fa tsy trondro manontolo na fako avy amin'ny trondro na biby hafa
Araho akaiky ny sakafo mba hampihenana ny sakafom-poana sy hampitomboana ny fahombiazan'ny sakafo
Mampiasà fahana miaraka amin'ny tahan'ny fampidirana trondro ambany indrindra sy menaka trondro, mety amin'ny karazana kolontsaina
Raha misy trondro sy menaka ny trondro dia alao antoka fa azo avy amin'ny tahiry trondro azo tanterahina maharitra izy ireo
Hamarino tsara fa ny akora hafa ao anaty fahana dia azo alaina maharitra (ohatra, vokatra avy amin'ny zavamaniry toy ny soja)
Zahao ny fitambaran'ny sakafo mba hahazoana antoka fa tsy misy poizina ao anaty sakafo ary ampy ho an'ny omega-3 asidra matavy ho an'ny karazan-kolontsaina ny akora fahana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanana ekolojika any Amerika, ny vokatry ny fiompiana amin'ny fiompiana trondro manerantanymanokatra fisie PDF
Ny trangan-javatra sy ny fiantraikan'ny hazandrano Atlantika voafafa manokatra fisie PDF misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSalarin'ny salamomanokatra fisie PDF amin'ny Natioramanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKarazana voaaro sy fifandraisan'ny fiompiana anaty ranomasinamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy tetezamita avy amin'ny trondro saro-bidy mankany amin'ny fambolena marobe ao amin'ny fiompiana tranom-borona an-dranomasina any Aziamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFambolena trondro amoron-dranomasina ho fitaovana fampivondronana trondro (FAD)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTrondro anaty: Fish Out (FIFO) fampitahana ho an'ny fiovam-po amin'ny sakafom-boankazo amin'ny trondro nambolena, ao anatin'izany ny Salmona